तीन करोडको जग्गा ३९ लाखमा पास ! नक्कली जग्गाधनीले यसरी गायब पारे ३ बिघा जग्गा - IAUA
तीन करोडको जग्गा ३९ लाखमा पास ! नक्कली जग्गाधनीले यसरी गायब पारे ३ बिघा जग्गा
ramkrishna July 6, 2017	तीन करोडको जग्गा ३९ लाखमा पास ! नक्कली जग्गाधनीले यसरी गायब पारे ३ बिघा जग्गा
चितवन भण्डारा गाविस वडा नम्बर २ का लोकेन्द्रराज पाठक प्रायः नेपाल बस्दैनन् । विदेश बस्ने भएका कारण उनको जग्गा जमिन अरुले नै कमाएर खाने गरेको थियो ।
भण्डारा २ घर छेउको ३ बिघा १ कट्टा ५ धुर जग्गा पाठकले बेच्ने सोच बनाए । जग्गा बेच्नका लागि उनले मान्छे खोजिदिन भन्दै केही व्यक्तिलाई पुर्जा दिए । जग्गा किन्ने ग्राहक खोज्नेहरुले पनि लालपुर्जा बोकेर मालपोत गए ।
जग्गाको नक्सा उतार्न खोज्दा त्यो जग्गा अरुको नाममा देखियो । आफ्नो जग्गा अरुको नाममा देखेपछि पाठक तिनछक परे ।
सोधीखोजी गर्दै जाँदा उनको जग्गा त किर्ते जग्गाधनी बनेर अरुलेनै कौडीको भाउमा बेचिसकेकारहेछन् ।
यसरी नक्कली जग्गाधनी बनेर बेचेको जग्गालाई ठग गिरोहले व्यक्तिका नाममा किनेर संस्थालाई बेचेर ठगी गर्ने गिरोहमा मालपोतका शाखा अधिकृतदेखि खरीदारसम्म थिए । पीडित पाठकले ठगिएको जग्गा फिर्ता पाउँ भन्दै ०७३ जेठमा जिल्ला अदालत चितवनमा मुद्दा दायर गरे, जुन मुद्दा अहिले विचाराधीन अवस्थामा छ ।
पीडित पाठकले यसअघि महानगरीय अपराध महाशाखा र अख्तियारमा समेत उजुरी गरेका थिए ।
अन्ततः ब्यूरोले गिरोहलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको छ ।
सीआईबीले गिरोहमा संलग्न मोरङ इटहराका ४८ वर्षीय देवेन्द्र थापा, झापा गौरीगन्जका ४६ वर्षीय नगेन्द्र कार्की, खोटाङका ३४ वर्षीय मीनबहादुर भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको ब्यूरोका प्रमुख डीआईजी नवराज सिलवालले बताए ।
उनका अनुसार मोरङ इटहराका थापा र कार्कीलाई मंसिर ३० गते इटहरीबाट र तत्कालीन मालपोतका शाखा अधिकृत मिनबहादुर भट्टराईलाई लगनखेलबाट पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।
ब्यूरोका अनुसार गिरोहले २०६६ साल चैत २८ गते नक्कली जग्गा धनी बनेर तीन बिघा, १ कट्टा, ५ धुर जग्गा एक लाख रुपैयाँ रोपनीका दरले आफ्नो नाममा पास गरेको थियो ।
मालपोतका कर्मचारीसँगको मिलोमतोमा उक्त जग्गा ६६ बैशाख ९ गते हेटाैंडामा रहेको नेचुरल फ्लावर एण्ड हरवल प्रालीलाई ४९ लाख ५० हजारमा बेचेको थियो । नेचुरल फ्लावर एण्ड हरवल प्रालीले २०६९ असार १६ गते हिमालयन बैंकमा धितो राखि ५ करोड ऋण निकालेको थियो ।
कसरी गरे ठगी ?
जग्गा धनी लोकेन्द्रराज पाठकले जग्गा बेच्ने भन्दै उक्त जग्गाको लालपुर्जा जग्गाको कारोबार गर्ने व्यक्तिहरुलाई दिएका थिए । त्यसपछि उनी केही समयका मुलुक बाहिर रहे ।
जग्गाको लालपुर्जा देवेन्द्र थापाको गिरोहको हातमा पर्यो । अनि सुरु भयो, ठगी धन्दा ।
जग्गा धनी लोकेन्द्र राज पाठकको नागरिकता तथा उक्त जग्गाधनी पुर्जा समेत किर्ते खडा गरी निजको भतिजा नाता पर्ने जीनवराज पाठकलाई बेजिल्ले पास गर्ने गरी झापा गौरीगंज ५ हुक्कागाछी, ढुकुरपानीका ४६ वर्षिय नगेन्द्र कार्कीलाई गिरोहले नक्कली जीवन राज पाठक बनायो ।
उनको नाममा किर्ते नागरिकता खडा गरी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका शाखा अधिकृत मिनबहादुर भट्टराईदेखि खरिदारसँग मिलेर जग्गा पास गर्न लगाइयो ।
नक्कली जग्गा धनीले १ लाख बिघाका दरले ६६ चैत २८ गते पास गरिदिए । बेजिल्ले पास भएपछि सो कागजात मालपोत कार्यालयका कर्मचारी वा हुलाकबाट मालपोत कार्यालय चितवनमा पठाउनुपर्ने हुन्थ्यो, तर गिरोह आफैँले सक्कल कागजातहरु मालपोत कार्यालयमा पुर्याएका थिए ।
त्यसैगरी नक्कली जीवन राज पाठकको नाममा उक्त जग्गा दाखिला खारेज गरी निज जीवनराज पाठकको नामबाट मिति २०६६ चैत ९ गते मकवानपुरस्थित नेचुरल फ्लावर एण्ड हर्बल प्रालीलाई बेचियो ।
“यो जग्गा ठगीमा एउटा ठुलै गिरोह लागिपरेको छ, करिब १० वर्ष भयो जग्गा गायव भएछ, नक्कली धनी बनेर जग्गा बेचिएको रहेछ, हामी अनुसन्धान गर्दैछौं,” ब्युरोका प्रमूख डीआईजी सिलवाल भन्छन्, “यति धेरै जग्गा नक्कली धनी बनेर किनबेच गर्नु सामान्य कुरा होइन ।”
Previous Previous post: २० बर्षपछि घर जग्गा गायब हुँदा चिन्तित
Next Next post: जिउदै मान्छेको मृत्यु दर्ता गरेर, करोडौं मुल्यको जग्गा झ्वाम